That's so good, right?: January 2016
Masturbation ataRestless Night
‘နွေးထွေးတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်အိပ်၊ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်အိပ် ဘယ်လိုအနေအထားနှင့် လှဲလျောင်းပါစေ ကိုယ်ခန္ဓာကို သက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ်ဆိုရင် အိပ်မောကျသွားတဲ့အဆင့်ကို သူ့အလိုလို အနှေးနှင့်အမြန်ရောက်ရှိသွားမယ်’ လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။
အခုတော့ မဲမဲမှောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းထဲက အိပ်ယာပေါ် ကျောခင်းကာ ဘာမှမမြင်ရပေမဲ့ မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်ထားမိပါရဲ့။ မျက်နှာကျက်ရှိရာကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ငေးရင်း အတွေးကမ္ဘာထဲ ချာချာလည်နေပါတယ်။
ကျွန်တော် TV လည်းမကြည့်ချင်သလို တခြားဘာကိုမှ လုပ်ချင်စိတ်မရှိပါ။
ဟေး! ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရမှာလဲ ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးပဲဟာ။
နုနုညံ့ညံ့ ည၀တ်ဘောင်းဘီအောက်မှာရှိနေတဲ့ ညီဘွားကို ပွတ်သပ်ချော့မြှူလိုက်တယ် ပုံစံမျိုးစုံပေါ့။ ညအိပ်ဘောင်းဘီရှည်ပါးပါးမှာ ကြယ်သီးအချို့ရှိနေတော့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ် တဖြေးဖြေးရှည်လျားလာတဲ့ ညီဘွားကို အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးဖို့လွယ်တာပေါ့နော်။
Wow! ကျွန်တော့်ငပဲက ညီဘွား မခေါ်နဲ့ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ခေါင်းထောင်ထလာတာ လည်တံကိုမော့နေရော။
ကျွန်တော်-ွင်းမထုဖြစ် ခဲ့တာ တော်တော့်ကိုကြာပြီပဲ။ အလုပ်ကိစ္စတွေနှင့် ဇယားရှုပ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်လေ။
ရှည်ရှည်လျားလျား အညောင်းဆန့်လာတဲ့ ငပဲကို အားရပါးရ အပေါ်အောက်အပြန်အလှန် ကျွန်တော် စတင်လက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အောက်နှုတ်ခမ်းသားကို ဖိကိုက်မိတဲ့အထိ ကိုယ့်ဖာသာဆန္ဒမီးတွေ ပိုမိုတောက်လောက်စေရော။ ညာဘက်လက်ကို ဆန့် တန်းရင်း အမှောင်ထဲမှာ ပစ္စည်းပျောက်ရှာမိတယ်။ အတန်ကြာစမ်းသပ်ပြီးမှ ခုတင်ဘေးရှိ ဘီရိုပုလေးရဲ့ အံဆွဲကိုစမ်းမိရပြီ။ အံဆွဲကို အလောတကြီးဆွဲထုတ်လိုက်သံက ညမှောင်မှောင်မှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံပြုပါတယ်။ အံဆွဲထဲ ဟိုသည်နှိုက်ရင်း ရင်းနှီး နေတဲ့ Tube ဘူးကြီးကို ဆွဲယူလိုက်တာများ ၀မ်းသာအားရပေါ့နော်။
ညအိပ်ဘောင်းဘီရှည်ကို ဆွဲချွတ်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီပါမကျန်ဖယ်ရှား၊ အပေါ်ပိုင်းက တီရှပ်ကိုလည်း ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က ဝေးကွာစေ လိုက်တယ်။ စောင်ကိုလည်း အိပ်ယာပေါ်က ကန်ချ၊ပြီးတော့ ခေါင်းအုံးတွေကို သုံးလေးလုံးထပ်ကာ နောက်မှီလို့အဆင်ပြေအောင် ဆက်လုပ်တာပေါ့။
ရှည်လျားပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးပေါ်ကို ချောဆီတွေ Lotion လူးသလို လူးပစ်လိုက်တယ်။ လက်နှင့် နေရာအနှံ့ ချောဆီတွေရွှဲစိုသွားအောင် ကစားသေးတာပါ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ အေးမြစိုရွှဲတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ပိုမိုမာတောင့်လာသလို ပိုပြီးလည်း တုတ်လာတယ်။
ငပဲထိပ်ပိုင်း ကွမ်းသီးခေါင်းကို လက်သီးဆုပ်ထဲမြှုပ်နေအောင် ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ပြီးနောက် သဲသဲမဲမဲ အထက်အောက် လက်ကို စတင်ကစားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်အတွေးစိတ်ကူးတွေကို လွတ်လပ်ရိုင်းစိုင်းစွာပြေးချင်ရာပြေးခိုင်းလိုက်ပါရဲ့။ အလင်းရောင်နည်းနေတဲ့ အိပ်ခန်းရဲ့ အမှောင် ထုဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးကို သေချာမမှောင်စေခဲ့ပါဘူး။ မျက်ဝန်းတွေကို မျက်ခွံတွေနှင့် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်စေ့လိုက်တယ်။
ကျွန်တော် ဒီဖီလင်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ သာယာမှုမျိုး ခံစားချင်ခဲ့တယ်ဆိုပါရစေ။
ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘယ်ဘက်လက်နှင့် ပြောင်းယူဆွဲကိုင်ပြီး အိပ်ယာပေါ်ကျောပြင်ကပ်သွားအောင် လှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်တွေကို လေထဲမြှောက်ကာ ကုတင်ဘောင် အမြင့်ပေါ်တင်လိုက်ပါရော။
ကျွန်တော်.....ကျွန်တော့် ညာဘက်လက်ညှိုးကို ချောဆီနည်းနည်းဆွတ်ကာ ခရေ၀ထဲ အသာထိုးထည့်လိုက်တယ်။
နောက်တော့လည်း ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးကို အတွင်းထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာနှင့် တပြိုင်နက်တည်း ဘယ်ဘက်လက်က ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ကာ -ုနေမိပါတယ်။ ခံစားရတဲ့ သာယာမှုဟာ မပြောပြနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတယ်ဗျာ။
ရှည်လျားပြီး တုတ်ခိုင်တဲ့ ငပဲ တစ်ချောင်း အခုအထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ လက်ချောင်းတွေအစားရှိနေရင် ပိုကောင်းမှာပဲ စိတ်ကူးယဉ်မိရဲ့။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် တော့ လက်ချောင်းတွေကို အားကိုးနေရပါတယ်။
ကျွန်တော် -ွင်းထုနေတာကို ရပ်ပစ်ပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ငပဲ ဟာ မာတောင်ဆဲ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ဆဲဆိုပါတော့။
ကျွန်တော့် လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကို ခရေ၀ထဲမှ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေခြင်းဟာ မျက်ဖြူဆိုက်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်။ မပြော ပြတတ်တဲ့ဖီလင်ပါ။
ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကိုကြီး သူငယ်ချင်း ဇေယျာဆိုတဲ့ ငနဲက -ိုးနေတယ်လို့ မြင်ယောင်မိနေရော။ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အပေါက် လေးက မထင်မှတ်စွာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ကိုပါလာတဲ့တစ်ရက် ကျွန်တော့်အစ်ကို့ အခန်းထဲ အ၀တ်လဲနေတာ တံခါးကို စေ့စေ့မပိတ်ဘဲနဲ့လေ။ ကျွန်တော်အသံမထွက်အောင် ငြိမ်နေရင်းချောင်းကြည့်နေခဲ့တာပေါ့။ တီရှပ်ကို ဦးခေါင်းကနေဆွဲချွတ်တော့ ပေါ်လာတဲ့ ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းတွေက အားရစရာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ကြည့်မိတော့....အိုး...ခပ်တုတ်တုတ်ငပဲက တရမ်းရမ်းဖြစ်နေပါတယ်။
လိင်တံထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတော့ ရင်ခုန်ဖို့ပိုကောင်းရ တယ်နော်။ ပျော့နေတဲ့အခြေအနေမှာတောင် အနည်းဆုံးငါးလက်မလောက်ရှိမယ်။
သူ့ရဲ့အ၀တ်မပါတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားမိရုံနဲ့ ကျွန်တော့် အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်မိတဲ့အထိ ဖီလင်ဝင်မိ ပါတယ်။
မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ! ခုတင်ဘေးက စားပွဲပုမှ အံဆွဲငယ်လေးကို ခပ်မြန်မြန်ပြန်ဖွင့်ကာ ရှာဖွေရေးပြန်ဆင်းရတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အလုပ်က တချို့သော Project တွေမှာ condom စွပ်နည်းပြတဲ့အခါသုံးတဲ့ dildo တစ်ခုရှိနေတာကို သတိရမိလို့ပေါ့ဗျာ။ လန့်တော့လန့် တယ် သူ့ကိုလည်း ချောဆီဆွတ်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေး ဖိသွင်းရတာ ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီးပဲ အီလည်လည်နှင့်။ ဖိဖိသွင်းလိုက်တော့ ၀င်သွားတာ က တစ်မျိုး၊ ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်တော့ တစ်ဖုံ အား...အ...အား။
ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထရင်း dildo အထုတ်အသွင်းကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ 'အို...အို...အာ..အ' အမျိုးအမည်မသိ ဖီလင်တွေ တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးနေပါရော။
ကျွန်တော့် Climax တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်နီးကပ်လာပါပြီ။ ကျွန်တော် dildo ကို အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာကို ရပ်၊ ငပဲကိုပြန် လည်ဆုပ်ကိုင်ကာ ခြေထောက်တွေကို ဆန့်ထားရင်း -ွင်းထုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ပူနွေးချွဲပျစ်တဲ့ သုတ်ရည်တွေ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ဝကနေ လေးလျော့လောက် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်း နိုင်စွာပဲ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေ ကျယ်လောင်စွာထွက်သွားရော။ ဘယ်သူကြားကြား ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်မိတော့။
ကျွန်တော့် အားရပါးရ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်း။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ပန်းဝင်ဦးမလား ယောင်ရမ်း ဟ မိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်ဗိုက်သား ပြင်၊ ဆီးစပ်တလျောက်တော့ သုက်ရည်တွေအိုင်ထွန်းနေတာပေါ့လေ။
ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေလည်း အိပ်ယောပေါ်မယ် အ၀တ်ပုံတစ်ခုလို ပုံကျလို့။ လှုပ်ရှားမှုမရှိ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ငပဲတစ်ခုလုံး မာတောင့်နေဆဲ တစ်ခုခုကျန်နေသလိုဆိုတော့ လက်နှင့်အသာဆွပြီး ဆက်ထုပြန်တာ ပူနွေးချွဲပျစ်တဲ့သုတ်ရည် များဟာ ရင်ဘတ်ပေါ် နွေးကနဲ နွေးကနဲပါပဲ။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ရတာ တဆတ်ဆတ်ကို ခါလို့။
ဒီတော့မှ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျော့သွားသလို မျက်ခွံများလည်း လေးလံလာရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျကာ အိပ်မက်ကမ္ဘာဆီသို့ အသွား......၀ါး…Good night Buddy!! ။
Alex Aung (21 May 2012)
Posted by Alex Aung at 2:47 PM No comments:
ကျွန်တော် ဒီနေ့အလုပ်မှာ ဇွဲသန်လိုက်တာ တော်တော်ဖားသွားတယ်။ အခန်းအသစ်ကလည်း ဒီနေ့မှ ငှားလို့ရတာဆိုတော့ နေရာချ တာဘာညာနှင့် စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ နေ့ပိုင်းအလုပ်လုပ်လည်းပြီးရော OT ဆင်းဖို့မတွေးတော့ဘူး အိမ်ကိုပြန် ရေနွေးပူပူနှင့် အညောင်းအညာပြေစိမ်ဦးမှပါလို့ပဲ စီစဉ်မိတယ်။ တောင့်တင်းညောင်းညာနေတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုလျော့အောင်လေ။
ရေနွေးနွေးတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ ရေစိမ်ကန်ထဲ ထိုင်နေရင်းကျွန်တော်တွေးနိုင်တာက လှိုင်းဂယက်ထသလို လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရေနွေးနွေးတွေ ရဲ့ အာနိသင်တွေမှာ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲနေတာကို သက်သာပြေလျော့စေတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရနေသလိုပဲဆိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အပိုဆုအနေနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရေမြှုပ်တွေက ကျွန်တော့်ငပဲကို ပွတ်သပ်တွန်းတိုက်နေသလိုဆိုတော့ မကြာပါဘူး ကျွန်တော့်ငပဲဟာ လန်းလန်းနဲ့ ခေါင်းထောင်ထလာရဲ့။ ကျွန်တော်ရေစိမ်ကန်ထဲ ဆင်းထိုင်နေရုံနှင့် ရေမြှုပ်ရေပူဖောင်းတွေဟာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လက်ချောင်းတွေနှင့် ပွတ်သပ်လှည့်လည်နေရင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတဲ့အရာတွေကို ပြေလျော့စေတယ်ပေါ့။
တစ်နာရီလောက်ထိုင်နေမိတယ်လို့ သတိပြုမိချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ရေစိမ်ကန်ထဲကနေထထွက်လိုက်ပါတယ်။ စိုစွတ်နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကို တဘက်အမွှေးပွကြီးနှင့် ခြောက်သွေ့အောင်ကိုယ့်ဖာသာပဲပြုလုပ်ကာ ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်နှင့် တီရှပ်ဝတ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ ဟို သည်လှည့်ပြုရင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားတွေက အော်ဟစ်ကြတယ် ဒီထက်ပိုပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာတွေကို ပျောက်အောင် လုပ်ဦးလို့။
ဒီတော့လည်း စားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုထိုင် ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်က massage service တစ်ခုလောက်ကိုရှာဖွေမိ ပါတယ်။ အံ့သြစရာ, ကျွန်တော့်အိမ်နှင့် တစ်မိုင်ပတ်လည်ဝန်းကျင်မှာ (၃)ခုလောက်ရှိမယ်။ ကျွန်တော်ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ပထမ ဆုံးတစ်ခုကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။
ချိုသာတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သံနှင့်အတူ မြို့ရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေကြောင်း နောက် ရက်သတ္တပတ် (၂)ပါတ် လောက်ကြာမှ ပြန်ရောက်မယ့်အကြောင်း voice message ကိုကြားရသေးတာပေါ့။
ဒုတိယတစ်ခုကို ထပ်ခေါ်လိုက်တော့ သူ့ customer ဆီသွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖြေတယ်လေ။ သူက ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုပေးခဲ့သေးတာ ကြောင့် အဲဒီနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်ကို အသာနှိပ် တုန့်ပြန်သံကိုနားဆင်လိုက်တော့ ချိုသာတဲ့အဖြေစကားက 'ဟုတ်ကဲ့ Andy ပါ' တဲ့။ ကျွန်တော်က အိမ်နဲ့သိပ် မဝေးတဲ့နေရာက တစ်ယောက်ယောက်ကို အနှိပ်ခံဖို့အတွက် ရှာနေကြောင်းသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကိုမေး တာကြောင့် အတိအကျလိပ်စာကို ပြောလိုက်တာ သူနေတာနှင့် လေးဘလောက်ပဲဝေးသတဲ့။ ကျွန်တော်က အနှိပ်ခန်းကို ဘယ်အချိန်ဖွင့် လဲမေးတော့ သူက လက်စသတ်နေပြီး ကျွန်တော်က နောက်ဆုံး ဖြစ်မှာလို့ဖြေတယ်။ ငါးမိနစ်လောက်ပဲ လမ်းလျှောက်ရမယ်ထင်တာ ကြောင့် ဖိနပ်ကောက်စွပ်၊ ပိုက်ဆံအိပ်ယူကာ အိမ်မှထွက်လာခဲ့ပါရဲ့။
ဒီနေရာမှာ ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော့်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပေါ့။ ကျွန်တော်က လူပျိုတစ်ယောက်ပါ။ straight တစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး အရပ် ၆ပေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၄၅ပေါင်၊ ကွေးကွေးကောက်ကောက် ဆံနွယ်ပိုင်ရှင်မျက်ဝန်းမျက်ဆံခပ်ညိုညိုနှင့်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားတွေဖွဲ့စည်းထားပုံက ကာယဗလမောင်တစ်ယောက်လိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်အလုပ်သဘာဝကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ကောင်မလေးတော်တော်များများ date နှင့် ပြီး ကောင်းကောင်း-ိုးဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်ကကြည့်ရဆိုးတဲ့ဟန်တော့ မပေါက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို bar မှာတွေ့တဲ့အတော်များများသောလူတွေက သဘောကျတတ်ကြလို့ပါ။ သူတို့တွေက ကျွန်တော့်ဆို ပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ချင်၊ပြီးတော့မှ ထွက်ခွာသွားလေ့ရှိတာပါ။
ကဲပါ...အနှိပ်ခံဖို့ချိန်းဆိုတဲ့ကိစ္စဘက်ပြန်လှည့်ရရင် ကျွန်တော်ညလေအေးအေးမှာ တော်တော်ကောင်းတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ ရှေ့တံခါးမ ဆီကို လျှောက်လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ အင်တာကွန်းစနစ်တပ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့တော့ ၁၀၄ ကိုနှိပ်ရော။ ရင်းနှီးတဲ့အသံတစ်ခုက စပီကာမှထွက်လာပြီး ခန်းမထဲကိုအဆုံးထိဝင်လာကာ သူစောင့်နေမယ့်နေရာကိုလာဖို့ပြောတယ်။
ကျွန်တော် ဖွင့်လာတဲ့ တံခါးရွက်ကိုဆွဲကိုင်ကာ အတွင်းထဲလှမ်းလိုက်တော့ မကြာခင်မှာပဲ Andy ရောက်လာတယ်။ တော်တော်ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ငနဲပဲဗျ။ ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့စတိုင်လ်အတိုင်း သူလည်းဝတ်ထားတာပါ။ အခန်းရှိရာကိုရောက်တော့ သူကရေချိုးဖို့လိုအပ် ရင် ကျွန်တော်ရေချိုးဖို့နေရာရှိကြောင်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်က အခုပဲရေနွေးစိမ်ချိုးပြီးထွက်လာကြောင်းပြောရတာပေါ့။ 'ကောင်းတာ ပေါ့ဗျ၊ ကြွက်သားတွေပြေလျော့နေတော့ စနှိပ်ဖို့ရာအဆင်ပြေတယ်လေ'
သူ့အခန်းထဲဝင်သွားသွားခြင်း တခြားဘဲတစ်ပွေ ထမင်းစားခန်းထဲထိုင်နေတာကို သတိပြုမိတယ်။ ကျောင်းစာလုပ်နေတာလား အလုပ် လုပ်နေတာလားမသိ စာရွက်တွေနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုပါတော့။ Andy က မိတ်ဆက်ပေးတယ် သူ့အခန်းဖော် Ben ဖြစ်ကြောင်းပေါ့။ Andy က အိပ်ခန်းရှိရာဆီကို ဦးဆောင်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ အနှိပ်ခုံတစ်ခုံပြင်ဆင်ထားတာလေ။ အလင်းရောင် ခပ်လျော့လျော့၊ နုညံ့တဲ့ ဂီတသံလေးတွေဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့ အခန်းနံရံနားမှာ ရေတွေစီးကျနေတဲ့ ရေတံခွန်တုတစ်ခု။ ကျွန်တော်တို့ဝင်ကတည်းက တော် တော့်ကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်နေပြီ မြင်လိုက်ရတဲ့အပြင်အဆင်ကြောင့်...။
Andy က အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပြီး အနှိပ်ခုံပေါ်ကိုမျက်နှာအပ်ပြီးမှောက်လိုက်ပါ၊ တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖုံးချင်တယ်ဆိုရင် စားပွဲ အစွန်းမှာ တံဘက်ရှိတယ်တယ်တဲ့။ အပူပေးထားတဲ့ ဆီနွေးအချို့ယူဖို့ မီးဖိုထဲသွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူပြန်ရောက်လာပါတယ် မြန်မြန်။
ကျွန်တော် ခုံပေါ်မှောက်အိပ်လိုက်ပြီး တင်ပါးတစ်ဝိုက်ကိုတော့ တဘက်နှင့် လွှမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ ကြားရတဲ့အသံ၊ ရတဲ့အခန်းထဲက ရနံ့တွေဟာ ကျွန်တော့်ကို တခြားကမ္ဘာခေါ်ဆောင်သွားသလိုပါပဲ။ Andy အခန်းထဲ ပြန်ရောက်လာတာကို ကျွန်တော်ကြားတောင် မကြားမိ။ ဒါပေမဲ့ စားပွဲပေါ်တခုခုတင်ပြီး သူ့လက်အစုံကို ဆီနွေးတွေနှင့် သုတ်လိမ်းတာကိုတော့ ခံစားမိရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘယ်နေရာမှာ ပိုမိုကိုက်ခဲနေလဲဆိုတာကို အလွန်တရာ နုညံ့တဲ့လေသံနှင့် သူမေးတယ်။ နောက်ကျောအောက်ပိုင်း တည့် တည့်နှင့် ပေါင်နောက်သားတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သတိပြုမိသမျှဖြေရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်လည်တိုင်နှင့် ပခုံးတစ်ဝိုက်ကို သူဆီနွေးတွေစတင်သုတ်လိမ်းပြီး ကျောပြင်ကြွက်သားမြှောင်းတွေထဲ လက်ချောင်းတွေကို ထိုးသွင်းနှိပ်နယ်လိုက်တယ်။ အစတော့ တော်တော်နေရတာအဆင်မပြေတာ။ ဒါပေမဲ့ သူဘယ်လောက်နှိပ်ရမယ် ဘယ်လိုဖိရမယ်ဆိုတာ သူသိနေနိုင်တော့ စိတ်ချနေလိုက် ပါတယ်။
ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုး ညည်းညူသံထွက်လာရပါတယ်။ သူ့လက်သန်သန်မာမာတွေက ကျောအောက်ပိုင်းတွေဆီရွှေ့ပြောင်း အလုပ်များတော့တာကိုး။ သူက 'ဒီဧရိယာဝန်းကျင်ကို ပိုနှိပ်ရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ လွှမ်းထားတဲ့တဘက်ကို ပိုလျောချလိုက်မှဖြစ်မယ်ဗျ' တဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် 'အဆင်ပြေပါတယ် လုပ်ပါ' လို့။
ကျွန်တော့်ကျောအောက်ပိုင်းဆီ တဖြည်းဖြည်းပိုမိုနှိပ်ပြုလာလိုက်တာမှာ တင်ပါးတ၀ိုက်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ တဘက်ကို လျောတိုက်ဆွဲချလိုက် တာကို ခံစားမိပါတယ်။ တင်သားဆိုင်ရဲ့အချို့သော အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပွတ်တိုက်သွားရင်းပေါ့။သူ့လက်အစုံဟာ မျက်လှည့်လိုပါပဲ ကျွန်တော့်ကျောရိုးနှင့်ခါးတစ်ဝိုက်ကို အလုပ်လုပ်သွားတာများ အံ့အောက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ၀မ်းသာကြည်နူးနေတဲ့သဘောထဲ မျောနေသလိုဖြစ်တော့ သူ့လက်အစုံ ပေါင်တံအရင်းဘက်ရောက်ရှိနေတာ၊ တဘက်ကို မပြီးအလုပ်လုပ်နေတာ၊ တင်သားတစ်ဝိုက်ကို နှိပ်နယ်နေတာတွေကို သတိမပြုမိတော့။
ဒါပေမဲ့....ကျွန်တော့်နောက်ကျောပြင်နှင့် ပေါင်တံတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း သူဘယ်လိုနှိပ်လဲ ဒီတော့...သြော် နောက်လက်တစ်စုံဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြွက်သားတွေကို နှိပ်နယ်နေတာကိုသတိပြုမိရတယ်။ကျွန်တော် မှောက်အိပ်နေရင်းမှ ခေါင်းကိုငဲ့စောင်းကြည့်မိတော့ အနှိပ်စားပွဲခုံခြေရင်းပိုင်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ခြေအစုံကိုမြင်မိရတာပါပဲ။ ကိုက်ခဲတင်းမာနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားများကို လက် အစုံနှစ်ခုက နှိပ်နယ်နေတဲ့ဖီလင်ကို ကျွန်တော်ခံစားရတာအတော်မိုက်ပါတယ်။ ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံပါပဲ။ Ben တစ် ယောက် စကားတစ်လုံးမဆိုဘဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ ဘယ်အချိန်က အခန်းထဲဝင်လာမှန်း ကျွန်တော်မသိ။
ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးဖြေလျော့ပြီး လှဲလျောင်းနေတာမှာ ငနဲနှစ်ပွေရဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို အလုပ်လုပ်မှုကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲနေ တာတွေ အဝေးသို့ရောက်သွားပါတော့တယ်။ အခုပြီးတော့ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ပေါင်သားတွေနှင့် တင်သားဆိုင်တွေမှာ အလုပ် များတော့မယ်။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို သူ့လက်နောက်ပိုင်းနှင့် အမှတ်မထင်ပွတ်တိုက်သွားတာ နှစ်ကြိမ်လောက်ထိခံစားမိရပါရဲ့။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိ သူထိထိသွားတဲ့ ဧရိယာတွေက ညင်ညင်သာသာနှင့် မွှေပြုသလိုခံစားရတာများ ပျော့ပျောင်းနေတဲ့ ညီဘွားက ခေါင်းထောင်စပြုလာတာကို ကျွန်တော်သတိပြုမိရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာများ ပက်လက်လှန်ခိုင်းရင် အရှက်ကွဲမယ့်ကိန်းပါ။ သူတို့ နှစ် ယောက်ကတော့ စကားဘာမှမဆိုဘဲကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဆက်အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကြည့်ရတာ ဘယ်ဧရိယာကိုနှိပ်ပြုရ မယ်ဆိုတာအာရုံစိုက်နေကြပုံပါပဲ။
သူတို့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၁၅မိနစ်ခန့် ဆက်အလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ Andy က 'ပက်လက်လှန်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ' တဲ့။ ကျေးဇူး တင်ပါရဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက နည်းနည်းပြန်ငြိမ်သွားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စွာပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်လိုက် ရတာက Ben တစ်ယောက် brief ဘောင်းဘီလေးနှင့်သာရပ်နေတာကို မြင်ရသလို Andy မှာတော့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပြီး ခပ်ပါးပါးဘောင်းဘီ တိုတစ်ထည့်ဖြင့်သာတွေ့ရရဲ့။
Ben ကျွန်တော့်ခြေတံတွေကို ဆီနွေးတွေလိမ်းစဉ်မှာ Andy က ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွေမှာ ဆီနွေးတွေကိုစိုစွတ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဆီးစပ်ဧရိယာတစ်ဝိုက် တဘက်ပါးပါးကို ပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းလို့ရမလားမေးချင်မိတယ်ဗျာ။ ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်မှုတွေက နှိုးဆွသလို များ ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတာကို ကြောက်တယ်။ ကျွန်တော်အဲဒါကို မေးမြန်းဖို့ ကြိုးပမ်းစဉ်မှာပဲ Andy က 'မင်းကိုမင်း နှိုးဆွခံရတယ်လို့ ခံစားရရင် စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ကွာ၊ အဲဒါတစ်ချိန်လုံး ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စပဲ၊ ပြီးတော့ သဘာဝပဲလေ' ။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောဘဲ ဆက်ပြီးလှဲလျောင်းနေလိုက်တယ် သူတို့နှစ်ဦးဆက်အလုပ်များနေတာကိုကြည့်ရင်းပေါ့။
Andy ရဲ့ ပူနွေးနုညံ့သောလက်တွေ ကျွန်တော့်ပခုံး၊ ရင်အုပ်ကြွက်သားများနှင့် တစ်ခါ တစ်ခါ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ခလုပ်တိုက်တာ တွေကို ခံစားနေရပါတယ်။ နုညံ့ လက်ကလေးတွေက ဘယ်လိုများပွတ်သပ်ပါလိမ့်။ Ben ကတော့ ကျွန်တော့်ခြေအစုံ၊ ပေါင်ကြွက်သား တွေဆီ နှိပ်နယ် တာကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာမှာ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို မထိထိအောင်လုပ်နေတယ်။ ရွှေဥတွေက နည်းနည်းပျော့တွဲ နေတာကို မထိ မိဖို့ဆိုတာမျိုး ရှောင်ရှားတာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခြေအောက်ပိုင်းဆီ ဆက်မနှိပ်ခင်ထိ ကျွန်တော့်ငပဲကိုပွတ်တိုက်သွား တာနှစ်ခါ။
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော့်ငပဲတောင့်တင်းဖို့ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ရပြန်ပေါ့။ ဒီတစ်ခါ ပြေလျော့မနေဘဲ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ခေါင်း ထောင်ထလာတာမြန်လှပါတယ်။ ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ဆီကို တည့်တည့်ညွှန်ပြနေပြီလေ။ Andy က ကျွန်တော့်တွေဆီ လှုပ်ရှားနေပြီး ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မထိခလုပ်ထိခလုပ်...အ..အ။ တပြိုင်နက်တည်းလိုလိုမှာတော့ Ben က ကျွန်တော့်ပေါင်အထက်ပိုင်းကြွက်သားတွေကို နှိပ်နယ်နေသလို မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပွတ်သပ်ဆွဲညှစ်သေးတယ်။ အစ ကတော့ ကာကွယ်ဦးမလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခံစားရတဲ့ဖီလင်က ကောင်းနေတာကြောင့် ဒီအတိုင်းဆက်လှဲနေပြီး သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်တာကို ခွင့်ပြုဖို့ပဲနေလိုက်တယ်။ ဘာတွေဘယ်လိုလုပ် ဘယ်လိုထင်ထင် ဂရုမစိုက်မိတော့။
နောက်တော့ Andy က အနှိပ်စားပွဲရဲ့ နံဘေးကိုရွှေ့လာတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အသားချောင်းက ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေကို ထိ နေသလို ခံစားရတယ်ဗျ။ ဦးခေါင်းကို Andy ဘက်စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ Andy သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ထားပြီး ရှည်လျားထွားကြိုင်း တဲ့ သူ့ငပဲဟာ ရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းနဲ့ နှစ်လက်မလောက်ပဲ ကွာတယ်ဗျ။
Whoa! အဲဒါ ဘာအထာလဲ? ဘာကြောင့် သူ့ဘောင်းဘီတိုကို လျောချွတ်ပြီး ငပဲကမတ်နေရတာပါလိမ့်မလဲ။ ကျွန်တော်က gay လို့ သူထင်မြင်ကြောင်းဆိုလိုတာ သို့မဟုတ် သူ့ငပဲကို အလကား စုပ်မှုတ်ပေးရမှာလားဗျာ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ! အာ.....ကျွန်တော့်ငပဲကို Ben သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာကို ကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်အော်ဟစ်လိုက်ချိန် ဟသွားတဲ့ပါးစပ်ထဲ Andy က သူ့ငပဲကြီးကို လျောကနဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အသာထည့်ပြီးမှ ပိုပိုပြီး အာခံတွင်းထဲထိ အတုတ်အသွင်းလုပ်တယ်လေ။
Ben ရဲ့လည်မျိုထဲထိ ကျွန်တော့်ငပဲကြီး ၀င်ဝင်သွားရတဲ့ ဖီလင်က ကျွန်တော်ပြုလုပ်မဲ့ ငြင်းဆန်မှုတွေကို မေ့သွားစေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေ တာကနေ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေချင်ပါရဲ့။ Ben ကသူ့လည်ချောင်းထဲ သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်တာကို ကြိုက်ပါ့ မလား။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော် Ben ပါးစပ်ထဲက ငပဲကို ကိုယ့်ဖာသာအသာလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဆုံးကာနီးပြီမို့ ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ Ben က သူ့လည်မျိုထဲထိရောက်အောင် ပိုပိုပြီးစုပ်မျိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံးလည်း Andy ရဲ့ငပဲကြီးနှင့်ပြည့်နေတာဆို တော့ ညည်းသံလေးပဲပြုနိုင်တယ်နော်။ 'အာ..အ..ရှီး' ပါးစပ်နှင့်အပြည့် ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေကို ဖြည့်ပေးလိုက်တော့ နောက်ဆုံး တစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ သူစုပ်မျိုနေတာမှာ နောက်ဆုံးပျော့ပျောင်းသွားတော့မှပဲ လွှတ်တော့တယ်။
Andy သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေစဉ်အတောအတွင်း ခံစားမိရတာက Andy ငပဲ ခေါင်းဟာ ဖောင်းကားလာပြီးသကာလ သုတ်ရည်အများအပြား ပါးစပ်နှင့်အပြည့်ဖြည့်ပေးတာကို ခံစားရသည်ပေါ့။ ကျွန်တော်ထွေးထုတ် ပစ်လိုက်ချင်ပေ မယ့် Andy က သူ့ငပဲကိုဆက်ပြီးထည့်ထားတာကြောင့် မျိုချတာကိုပဲလုပ်နိုင်ပါတော့တယ်။ တကယ်ဆို ဒီလိုအရသာမျိုး ကို မြည်းစမ်းဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် မခံစားနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းငံသလိုလို နှင့် တပြိုင်တည်းလိုလို ချိုမြသလား ခံစားရပါ တယ်။
အခု နုညံ့ချိုသာတဲ့ Ben ရဲ့ အသံကိုကြားလိုက်ရတာ 'ကျုပ်အလှည့်နော်' ဆိုပဲ။ Ben က Andy ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ရွှေ့သွားတော့ Andy က သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ် Ben က သူ့ငပဲကိုဖြည့်ပေးတော့တယ်။ တော်တော်တုတ်တဲ့ အမျိုးသားပစ္စည်းကြီးပဲဗျာ။ ပါးစပ်နှင့်ကိုပြည့် ရောပဲ။ ကျွန်တော့်မေးရိုးတွေဟာ ပွင့်ဟရလွန်းလို့ နည်းနည်းတောင် ညောင်းလာတယ်။ သူက ပိုပိုပြီးဖိသွင်းတယ်။ Andy စားပွဲပေါ်တက် ကျွန်တော့်ငပဲကို အမျိုးမျိုးဆွပြန်တော့ ပြန်ပြီးမာတောင့်လာရရော။ ခဏနေတော့ Andy သူ့တင်ပါးအစုံကိုဖြဲပြီး ထိုင်ချလိုက်တာ ကျွန်တော့်ငပဲ တစ်ခုလုံး လျောကနဲဝင်သွားတယ် ရွှေဥတွေနှင့် တင်သားဆိုင်တွေဖိကပ်တဲ့အထိ။ Andy တစ်ယောက်အပေါ်က ဖိထိုင် လိုက်ကြွလိုက် လုပ်နေချိန်မှာပဲ Ben က သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တယ်။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်တွေ တဖျင်းဖျင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ပေါက်ကွဲချင်လာချိန်မှာပဲ Ben က ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သူ့ရဲ့မလိုင်ပျစ်တွေ ပန်းထည့်ပါတယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်း Andy ရဲ့ဆောင့်ချထိုင်သွင်းမှု တစ်ချက်မှာပဲ ကျွန်တော့် သုတ်ရည်တွေကို အားရ ပါးရသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ရဲ့။ ဘဲနှစ်ပွေနှင့် လိင်ကိစ္စဖြစ်ပျက်ခဲ့ရခြင်းကို ကျွန်တော် ယုံတောင်မယုံနိုင်တော့။ အရင်က gay sex ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကြံစည်တွေးတောမှုကို မရှိခဲ့တာ။ ဒါကတော့ သဘာဝကျတဲ့ငြင်းဆန်မှုဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းပြချက်အချို့အရ အမှတ်မထင်ဖြစ်ပျက်ခံစားရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ကျွန်တော် သာယာမိပါတယ်။
အားလုံးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကဆွဲနှုတ်၊ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ငုံ့ကိုင်းကာ နှုတ်ခမ်းကို ငြင်ငြင်သာသာ အနမ်း တစ်ချက်ပေးပါတယ်။ Andy ကလည်း စားပွဲပေါ်ကဆင်း ကျွန်တော်ထထိုင်နိုင်အောင် သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုကမ်းပေးပါတယ်။ သူက ရေချိုးချင်ရင် ချိုးဖို့ပြောသေးတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဖျားဆီ Andy ကလည်း မက်မက်မောမော အနမ်းပေးပြီး တဘက်တစ်ထည်ကို ကမ်းပေးတယ်။ 'ရပါတယ် ကျွန်တော့် အိမ်မှာပဲ ရေချိုးတော့မယ်'ဆိုပြီး ဘောင်းဘီတို၊ တီရှပ်နှင့် ဖိနပ်တွေကောက်စွပ်လိုက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် တံခါးမကြီးဆီပြန်ဖို့ ခြေစလှမ်းတော့ Andy က Ben လည်တိုင်မှာ သူ့လက်တစ်ဖက်ကို သိုင်းဖက်ထားရင်း 'ကိုယ်တို့ဆီ မင်းအနှိပ်ခံချင်တဲ့အခါ ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ကွာ'တဲ့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြသဘောတူပြီး ပြန်လာခဲ့ရော။
နောက်ဆို ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုဖြစ်ချိန်တိုင်း သူတို့နှစ်ယောက်နှင့် အနှိပ်ခံဖို့ ဖြစ်နိုင်သွားပြီ...Woo Yeah!.. ။ ။
Alex Aung (5 June 2012)
Note: ဒီလအတွက် အသစ်တစ်ပုဒ်ကို ခပ်ရှည်ရှည်လေးတင်မယ်ဆိုပြီးရေးနေတာ ပြီးဆုံးကာနီး နှစ်မျက်နှာလောက်အလိုမှာ ကွန်ပျူတာ Error ကြောင့်ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကိုလည်းပြန်မရေးချင်မိတော့ပါဘူး ငိုချင်မိပါရဲ့။ အခုတော့ လူမသိခဲ့တဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့ပဲ အပျင်းဖြေတော်မူကြပါလို့။
Posted by Alex Aung at 2:43 PM No comments:
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်း ၁၀ ခု
သင့်လိင်တံအား မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၁၁)ချက်